Dr. Abdinur for President – Dr. Abdinur Sheikh Mohamed for President
Dr Abdinur waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho oo uu kubaraaray. Waxa uu waxbarashadiisii malcamadda iyo schoolka hoose kusoo qaatay isla magaalada Muqdisho, dugsiga hoose ee Hodan iyo dugsiga dhexe ee 21ka October. Waxa uu ka baxay machadka tababarka macallimiinta oo uu noqday macallin u shaqqya Wasaaradda Waxbarashada isagoo bare ka ahaa dugsiyada dhagaxtuur iyo Xamar ee magaalada Muqdisho. Dr. Abdinur waxaa uu ku biiray Jaamicadda Lafole sannadkii 1980kii isagoo ku takhasusay maadooyinka Xisaab iyo Fisikis. Dr. Andinur waxa uu macallin ka noqday dugsiga sare ee Xanaanada Xoolaha ee Km7.
Murashax Madaxweyne ayaan ahay…..!
Maxaad guddaa, maxaadse gashaa?, yaa ku yaqaan oo kaa warbixin kara!, Caddayn ( Affidavit) ma haysataa!.
Loolanka iyo hardanka Siyaasaddaa dalkeenna waxaa badnaaba laga daalacdaa Shabakadaha wararka (Websiteyada) Soomaalida. Haddaba aniga oo maalin dhawayd Hiiraan Online hoygooda soo booqday, ayaan waxaaa ku arkay xayeysiis nin aan saaxiib nahay ku soo dhejistay shaashadda. Waa murashax Dr. Cabdinuur Sh. Maxamad oo u taagan doorashada xilka Madaxweynaha Soomaaliyeed. Doorasha waxaa la filayaa inay dhacdo horraanta sannadka soo socda 2020- 2021 haddii Alle idmo.
Haddaba aniga oo ah Qoraaga Maxamad Sh. Xasan Nuur, ahna asaasaha shirkadda horumuudka u ah daabacaadda kutubka Soomaaliyeed ee (Scansom Publishers oo la yagleelay sannadkii 1993) waxaan caddayn ka bixinayaa aqoonta aan u leeyahay Murashax Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamad.
Cabdinuur waxaan dugsiga hoose ka wada dhigannay Iskoolkii la oran Iskool Hodan ee Xamar, waxaana ka baxnay sannadkii 1970. Kaddib waxaan u wareegnay Dugsiga Dhexe ee 21 Oktoobar, sannadkii 1971.
Ololihii 1974-1975 waxaa ardadii iskuulkayaga la geeyey Degmada Waajid iyo Tiyeeglow Gobolka Xuddur. Muddo ayaan kala irdhownay, kaddibna anigu waxaan soo galay dalka Sweden 1981 kaddibna waxaan u soo wareegay magaalada Toronto, Canada sannadkii 1997. Cabdinuur oo qaddar iga dambeeyey isaguna wuxuu soo galay dalka USA 1982. Dib ayaan isu hellay sannadkii 1998 ilaa intii ka dambaysay, in badan ayaan wada shaqaynnay. .
Waxan jeclaan lahaa inaan faaladaan kooban ugu ifiyo shacabka Soomaaliyeed sababta iyo muhiimada murashaxnimadeyda jagada ugu sareysa dalka, iyo weliba sababta aan sida gaarka ah ugu qalmo hogaanka dalka xilligan adag.
Talaado, November 3, 2020 Xaaladda kala guurka dalka ku jiro waxay u baahan tahay in…
Munaasabad lagu tageerayay Xisbiga Midowga Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay Baladweyne. Magaaladda Baladweyn ee xarunta…
Munaasabadda maalinta dhalinyarada ee 15-ka bisha May darteed, Xisbiga Midowga Qaranka waxa uu u dirayaa…
We will be happy to hear from you, get in touch.